iikhompyuter kunye ne-intanethi | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: iikhomputha kunye ne-intanethi
IBhanki yamandla-yintoni le? Ibhanki yamandla eHiper
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 08.01.2020
Umsebenzi osebenzayo kunye nezixhobo ukhupha ibhetri ngokukhawuleza. Abantu abaninzi bajongane neebhetri ezifileyo ngeli xesha lingafanelekanga. Ngelishwa, awusoloko unakho ukufikelela kwindawo yokuphuma okanye kwitshaja. Njani ...
Ukuqwalaselwa kokubhala ngesandla. Zeziphi iinkqubo eziza kunceda koku?
Ngamanye amaxesha umnini wekhompyuter yakhe ujongana nomsebenzi onzima-ukuguqulela isicatshulwa esibhalwe ngesandla kwifomathi yedijithali. Ewe unokwenza lo msebenzi ngesandla. Nangona kunjalo, le ndlela iyasebenza ...
Minecraft: amakrele. Uyirhwaphiliza njani ikrele kwiMinecraft
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 15.10.2019
Xa uqala ukubonakala kwilizwe leMinecraft, awunanto kwaphela. Kuya kufuneka ukhuphe izixhobo zakho zokuqala ngezandla zakho kwaye, ngoncedo lwabo, yenza izixhobo zakho zokuqala ...
Sidlala iziphumo, okanye siCima njani iimfuno kwi-Sims-3?
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 02.11.2019
Abantu bafuna ntoni? Lo mbuzo ungaphendulwa ngeendlela ezahlukeneyo, kodwa nayiphi na impendulo iya kuhlala ingaphelelanga. Ngaba kungenxa yokuba sahlukile? Hayi, kuba iinjongo eziqhelekileyo zibanzi kakhulu ... Yonke into ...
Ungazisebenzisa njani isigqebhezana kwi-Aliexpress: imiyalelo yokuthenga
Wonke umntu owaziyo ngeqonga lokurhweba njenge-Aliexpress unokugcina kakhulu ekuthengeni. Kwiimveliso ezininzi kule ndawo yamaTshayina, amaxabiso sele ephantsi kakhulu kunamaxabiso entengiso. Uninzi lude ...
"Witcher 3": ukuhamba. "Ubuncwane boBala iRoyven", ukufuna ibali
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 24.10.2019
IWitcher 3 yiRPG emangalisa wonke umntu. Ewe, iinxalenye zokuqala nezesibini zeprojekthi zazisele zenziwe ngobugcisa, kodwa okwesithathu kwabonakala kungcono, kunika umdlali inkululeko enkulu yokwenza ...
Yintoni ifowuni yefowuni kwifowuni yeselfowuni?
Abanye abasebenzisi befowuni, bangena ngaphakathi kuseto, bafumana isifinyezo esingaqondakaliyo TTY okanye ibinzana elithi "Imowudi yohlobo lweTeletype". Kwakhona, uphawu lweempawu lunokubakho kwibar yomgangatho we-smartphone. Yintoni i-TTY kwifowuni? Yantoni…
Uyifaka njani iGoogle Chrome kwikhompyuter. Imiyalelo yabaqalayo
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 25.09.2019
Unokumangaliswa, kodwa namhlanje ayingabo bonke abasebenzisi abakwaziyo ukufaka iGoogle Chrome kwikhompyuter, kwaye oku ngaphandle kwento yokuba esi sikhangeli siyinkokeli engenakuphikiswa phakathi ...
Imifanekiso eqingqiweyo kunye neeMfuno zeNkqubo kwi-Crysis 3
ICrysis. Kuninzi okungakumbi kweli gama ngaphandle nje kwegama lotolo. Lo mdlalo uhlala ufumana isihloko esihloniphekileyo kwicandelo "Best Graphics". Icandelo ngalinye elitsha liseta ibha elandelayo ukuba wonke umntu akhokelwe ...
Uyixhasa njani i-akhawunti yePayPal ngokusebenzisa iQiwi
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 03.12.2019
Urhwebo lwe-Intanethi lukhula ngesantya esikhawulezayo, kwaye oosomashishini abaninzi be-Intanethi baseRussia bazama kungekuphela ukugubungela iimarike zasekhaya, kodwa nokusebenza nabathengi bamanye amazwe. Ewe kunjalo, oku kufuna ukubanakho kungasebenzisi intlawulo yaseMelika kuphela ...
Ubhalisa njani kwi "Maila": imiyalelo yabaqalayo
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 10.01.2020
Namhlanje siza kufunda ngendlela yokubhalisa ngePosi. Ngokubanzi, kubasebenzisi abaphambili, akukho nto inzima kulo mbandela. Ngapha koko, bona ngokwabo banokuchaza umgaqo wobhaliso kuye nakubani na, kwaye bancede ...
100% yendlela yokususa isipaji se "QIWI"
Unokufumana izigidi zophononongo kwinkqubo yokuhlawula yeQIWI kwi-Intanethi. Kwaye ayisiyiyo yonke into elungileyo, ngaphandle kwenkqubo elula yobhaliso. Owona mbuzo uthandwayo kunye nowokugqibela phakathi kwabasebenzisi uthi "Njani ...
Ezona injini ziqhelekileyo zokukhangela zaseJamani
Kwintsimi yelizwe lethu, inkokeli phakathi kweinjini yokukhangela ingabizwa ngokuba yiprojekthi yasekhaya "iYandex", apho inkampani yamazwe aphesheya "uGoogle" ilwela ngokungapheliyo ilungelo lobukhulu. Masibone ukuba zinjani izinto kule ndawo ...
Ukuba uguqulela eli gama ngokusuka kwisiNgesi, oko kuthetha ukuba "uyakhwaza". Masizame ukwenza lula inkcazo. Ngxola - yintoni? Ngokusisiseko, ezi ziividiyo ezinemeko efanayo yophuhliso. Kuqala ngo ...
Yeyiphi engcono-PS3 okanye Xbox 360? Ndikhangela impendulo
Ewe, ekugqibeleni sigcine imali kwaye sikulungele ukufezekisa iphupha lethu lakudala kwaye sithenge ikhonsoli elungileyo yomdlalo! Sinomdla wokuntywila kwihlabathi elinomdla nelinomdla lemidlalo kwaye sizinikele kulo ...
Iqanda le-Ista kumdlalo-yintoni leyo? Amaqanda e-Ista nge-Outlast, iMinecraft kunye nemidlalo ye-GTA-5
"Iqanda le-Ista" ligama loncwadi "lwamaqanda ePasika" kwimidlalo, kwiimuvi, kwisoftware. Luhlobo lwemfihlo, olunomxholo ongalinganiyo nomxholo ngokubanzi, ujongeka ungenakuphikiswa, ungenangqondo kwaye uhlala uhleli ...
Iphulo elongezelelweyo leMfazwe yeWarcraft 3: iTrone eNgcwele. Inkcazo
Amaphulo ongezelelweyo eWarcraft 3: Itrone efriziweyo yaqala ukubonakala phantse kwangoko emva kokukhutshwa komdlalo wokuqala. Nokuba sele kudlule iminyaka elishumi, bahlala bedumile. Amaphulo ayenziwe bobabini abalandeli kunye neefemu zomdlalo. ...
Ungamnqanda njani umntu kwiVKontakte: ukufunda ukwenza "uluhlu olumnyama"
Namhlanje siza kuthetha nawe malunga nendlela yokunqanda umntu eVKontakte. Kwakhona, masizame ukufumanisa kunye nawe ukuba lo msebenzi uza kusinika ntoni. Ayizukuba ngaphezulu kokugubungela ngengqwalaselo ...
"Iimpawu ze-USSR" - imigaqo yomdlalo
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 20.11.2019
Ukuba ungumnini weselfowuni oqhuba i-Android OS, ngokuqinisekileyo unokukhuphela iintlobo ezahlukeneyo zezicelo, kubandakanya imidlalo, kuyo ngaphezulu kwesihlandlo esinye. Namhlanje sigqibe kwelokuba ...
Yintoni igama lenkqubo yokwenza imiboniso? Inkcazo yeenkqubo zokwenza inkcazo-ntetho
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 26.11.2019
Xa ubuza umbuzo wento yokuyilwa kwenkcazo-ntetho ibizwa, uninzi lwabantu ngokungathandabuzekiyo lunobudlelwane nenkqubo eyaziwayo yePowerPoint evela kwaMicrosoft. Yenzelwe ukudala izinto ezahlukeneyo ...
Page 1 Page 2 ... Page 949 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-78 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,567.